Ithegi: Ukuboniswa kwedatha | Martech Zone
Maka: Ukuboniswa kwedatha
NgoLwesine, Julayi 18, 2019 NgoLwesihlanu, Julayi 19, 2019 UMariya Bocheva
Umbono ka-Simo Ahava we-atypical kumgangatho wedatha kunye nolwakhiwo lonxibelelwano luhlaziya indawo yonke yokuphumla kwi-Go Analytics! inkomfa. U-OWOX, inkokeli ye-MarTech kwingingqi ye-CIS, yamkele amawaka eengcali kule ndibano ukuze babelane ngolwazi lwabo kunye nemibono. Iqela le-OWOX BI lingathanda ukuba ucinge malunga nomba ophakanyiswe nguSimo Ahava, onokuthi ngokuqinisekileyo ube nakho ukwenza ukuba ishishini lakho likhule. Umgangatho weDatha kunye noMgangatho woMbutho
Isilika: Guqula idatha kunye neSpredishithi kwiiPhononongo eziPapashiweyo
NgeCawa, ngoJulayi 19, 2015 NgeCawa, ngoJulayi 19, 2015 Douglas Karr
Ngaba wakha waba nespredishithi esineqoqo elimangalisayo ledatha kwaye ufuna nje ukuyibona ngeso lengqondo-kodwa ukuvavanya nokwenza iitshathi ezakhelweyo ngaphakathi kwi-Excel kwakunzima kakhulu kwaye kuchitha ixesha? Ungathini xa ufuna ukongeza idatha, ukuyilawula, ukuyilayisha kunye nokwabelana ngezo mboniso? Unako ngeSilk. Isilika liqonga lokupapasha idatha. Iisilika zinedatha kwisihloko esithile. Nabani na onokukhangela iSilk ukuze ahlole
Ividiyo: Ubugcisa bokuBonwa kweDatha
NgoLwesithathu, nge-29 kaJanuwari 2014 NgoLwesithathu, nge-29 kaJanuwari 2014 Douglas Karr
Njengoko sisebenza ngedatha kunye neeseti zedatha enkulu kunye nabathengi, sifumanisa ukuba idatha iba yingozi kakhulu xa ichazwe gwenxa okanye itolikwe gwenxa. Ngamanye amaxesha abathengisi basebenzisa eli thuba ukuze bajije ukutolikwa ukuze kuzuze umthengi. Oku kubi njengoko kunokukhokelela kulindelo oluphosakeleyo. Ukujonga idatha kunokuba kukukhohlisa, kodwa idatha yokubonakalayo inokuxela kakhulu. Xa sisebenza kunye ne-infographics, i-odolo yokubonwa kufuneka ivele
I-BuzzRadar: Amaziko oLawulo lweNtlalontle kunye nokuBonwa kweMisitho
NgoLwesithathu, nge-15 kaJanuwari 2014 NgoLwesibini, Januwari 14, 2014 Douglas Karr
Sibhale malunga notshintsho olumangalisayo kwimiboniso ebonakalayo enamava kwiindawo zemidlalo kunye noPostano (owakha isicelo sethu esiphathwayo). Eli licandelo lobuchwepheshe elikhulayo. Ngokoluvo lwam, ndiyakholelwa ukuba uninzi lweenkampani ziya kuba neebhodi zazo zokubonisa kunye namaziko okuyalela, nangona zingenakuba zibukeka njengeBuzz Radar's ye-2014 International Consumer Electronics Show: Okwangoku iseBeta, iBuzz Radar izinze eLondon kwaye ibonelela